'ရိုက်ကွင်း မန်နေဂျာတွေကို ပိုက်ဆံပေးရမှ ရုပ်ရှင်ရိုက်ရမယ် ဆိုရင် မရိုက်ဘူး' လူကြမ်း သရုပ်?? - Yangon Media Group
‘ရိုက်ကွင်း မန်နေဂျာတွေကို ပိုက်ဆံပေးရမှ ရုပ်ရှင်ရိုက်ရမယ် ဆိုရင် မရိုက်ဘူး’ လူကြမ်း သရုပ်??
ဝါရင့်လူကြမ်း သရုပ်ဆောင် ကိုကိုဦးနှင့် တွေ့ဆုံခိုက်မှာ လူကြမ်း သရုပ်ဆောင် လောကမှာကြုံတွေ့ နေရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အ ခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခု လို မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး- ”ဟီးရိုး” ဇာတ်ကားမှာ ဘယ်လိုကာရိုက်တာနဲ့ ပါဝင်ထား လဲ။
ဖြေ- ကျွန်တော့်ကာရိုက်တာ က တော့ အရမ်းကိုအတ္တကြီးပြီး သား ကို အရမ်းအလိုလိုက်တဲ့ လူဆိုး ခေါင်းဆောင်ကြီး တစ်ယောက်အ ဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
မေး- နှစ်ပေါင်းများစွာ လူကြမ်း ကာရိုက်တာပဲ ရိုက်တာများတော့ ငြီးငွေ့လာတာမျိုးမဖြစ်ဘုးလား။
ဖြေ- ကျွန်တော် ဒီလောကမှာ နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်ကျော်ကျော်လုပ် လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွင်း တွေမှာ ဒီကာရိုက်တာပဲရိုက်ရတာ ကျတော့ ကြာလာတော့ ငြီးငွေ့ လာပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူတန်း တူ မင်းသားတွေကို အားကိုးရပါ တယ်။ သူတို့က ဘယ်လိုအက်ရှင် ဇာတ်လမ်း အသစ်အဆန်းတွေ ကို ရိုက်မလဲဆိုတာ မေးရပါတယ်။ အချစ်တွေ အလွမ်းတွေရိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့က မပါရပါဘူး။ အခုဟာက လူဆိုးသူခိုး ကာရိုက် တာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကို တန်း ပြီးတော့ မြင်နေကြတယ်။ ကျွန် တော်တို့ကိုလည်း ဇာတ်ရုပ် အမျိုး မျိုးခိုင်းလို့ရပါတယ်။ အရင်တုန်း က ကျွန်တော်နဲ့ ကိုအောင်ခိုင်ကို ကြော်ငြာလေးတစ်ခု ရိုက်ခိုင်းတယ်။ ရိုက်ခါနီးကျတော့မှ လူကြမ်းတွေ နဲ့ ရိုက်ဖို့လားဆိုတော့ မရိုက်ဖြစ် တော့ပါဘူး။ အခုခေတ်က ပရိသတ် တွေကတော့ တိုးတက်အဆင့်မြင့် လာပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနုပ ညာအသိုင်းအဝိုင်းက အမြင်တွေ ကတော့ အဆင့်မမြင့်သေးပါဘူး။ ဒီအတိုင်းပါပဲ။
မေး- ဒီလောကထဲစဝင်လာတုန်း ကရော ဖိုက်တင်ခန်းတွေလုပ်ချင် တာကြောင့် ဝင်လာခဲ့တာလား။
ဖြေ- အရင်က ကျွန်တော့် အဖေ က ”သားဗိုလ်အောင်ဒင်” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို ရိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဦးကျော်ရွှေနဲ့ အဖေကသူငယ်ချင်း တွေဖြစ်တယ်။ အဖေကကျွန်တော် ကိုကြီးလာရင်မင်းသားဖြစ်ရမယ်။ ဦးကျော်ရွှေဆီကိုအပ်မယ် အဲဒီလို ပြောဖူးပါတယ်။ အဖေကစစ်သား ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို သရုပ် ဆောင်လုပ်ဖို့ရွေးတယ်။ ရိုက်ခါနီး မှ ပျက်သွားတာများတယ်။ နောက် ပိုင်းမှာတော့ ပန်းဆိုးတန်းမှာ လူ ကြမ်းတွေနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ငွေလည်း မတတ်နိုင်တော့ လူကြမ်းစလုပ် တယ်။ ပထမပိုင်းမှာ လူကြမ်းတွေ နဲ့ ပြဿနာတွေလည်းတက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကိုအောင်ခိုင်နဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် တော် တော်တွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး- လက်ရှိ အနုပညာကြေးရ ရှိမှုအခြေအနေတွေကရော ဘယ်လိုရှိလဲ။
ဖြေ- မင်းသားတွေသာ သိန်းကို ရာနဲ့ချီပြီး ရသွားတာ ကျွန်တော်တို့က တဖြည်းဖြည်း နည်းနည်းလာ တယ်။ အခုဟာက ရုပ်ရှင်လောက မှာက ဒီမင်းသားဒီဇာတ်ပို့ ဒီအဖွဲ့ ဆိုပြီးတော့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့မှာတော့ အဲဒီလိုအဖွဲ့တွေ မရှိ ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ကိုယ်ရ မှာလေး တောင်းရင်တောင် မင်း သားကို ဘယ်လောက်ပေးလိုက် ရလို့ အစ်ကိုတို့ နည်းနည်းလျှော့ ပါဦးဆိုပြီးပြောပါတယ်။ ကျွန် တော်တို့မှာရတာ နည်းနည်းပါ။ အခုဟာက ရန်ကုန်ကနေ ပြင်ဦးလွင် မှာ သွားရိုက်တယ်။ လူကြမ်းတွေ နံနက်ရောက်တယ်။ နေ့လယ်မှာ ရိုက်တယ်။ ညနေဆိုရင်ပြန်ခိုင်းပါ တယ်။ လမ်းစရိတ်လည်း မပေးပါ ဘူး။ နောက်တစ်ခုက အရင်တုန်းက ရိုက်ကွင်းမန်နေဂျာတွေနဲ့ အခု ခေတ်မန်နေဂျာတွေ မတူပါဘူး။ အခုမန်နေဂျာတွေက တစ်ခါတုန်း က မန်နေဂျာက အစ်ကို ကျွန်တော့် ကို မုန့်ဖိုးပေးဦးလေတဲ့။ ကျွန်တော် ကလည်း ဘယ်လောက်မှမရတော့ ကျပ်တစ်သောင်းပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ သူကပြန်ပြောတယ်။ ကျွန် တော်က ကျပ်တစ်သောင်းစား မဟုတ်ဘူးတဲ့။ နောက်မှ အခြား သရုပ်ဆောင်တွေက ကျွန်တော် ကတော့ ကျပ်တစ်သိန်းပေးရတယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်လောက်ပေးရတယ် ဆိုပြီးပြောတော့ အဲဒီလိုပေးမှရိုက် ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်မရိုက်ဘူး။ မန်နေဂျာကို အဲဒီလောက်ပေးရင် အဆင်ပြေတယ်။ မပေးရင် မပြေ ပါဘူး။ ဒီကြားထဲ တချို့ဒါရိုက်တာ တွေက အစ်ကို ဒီဇာတ်ကားထဲပါ ဖို့ ကျွန်တော်ပြောပေးထားတာနော် လို့ပြောရင် သူ့အတွက် အရက် တစ်ပုလင်းပို့ပေးရပါသေးတယ်။ မပို့ရင် ဆီမလာ ပဲမလာဆိုရင် ကျွန်တော့်ကို ဘယ်သူမှ မခေါ်ပါ ဘူး။
မတ်လအတွင်း နားထောင်ရမယ့် အယ်လ်ဘမ်များစာရင်း ထွက်ရှိလာ
စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ဂုဏ်ညင်းထောင်ကျေးရွာမှ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအား စားသောက်ကုန်နှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ လှူဒါန်း